Gịnị Bụ The Best National Parks Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ The Best National Parks Na Europe
Ị a n'anya nke oké n'èzí? Anyị na-ekwu okwu oké ọhịa, ọdọ mmiri, ụmụ anụmanụ na osisi. hiking, biking, na izugbe ọhụrụ ikuku ịdị mma. Mgbe ahụ achọpụta kasị mara mma n'ogige ntụrụndụ mba na Europe, na-esi n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè.
Echefu ìgwè mmadụ, echefu osimiri, ichefu obodo shopping, na-abịa iji zuru ike nke kacha mma n'ogige ntụrụndụ mba na Europe.
Ọ bụ ezie na ịga na eke nkiri dị ka oké ọhịa nwere ike ịbụ mgbagwoju na a ụgbọ okporo ígwè na njem, na nke ahụ bụ enweghị ihe mere ọ ewepu ha. A eke na-adọrọ mmasị na-enye ndị zuru okè iche na-arụsi ọrụ ike obodo, na na dị nnọọ a bit nke nnyocha ị ga-ahụ na ha na ihe ijuanya na-adaba adaba iji ruo na enyemaka nke Save A Train.
National Parks na Europe: Germany na Switzerland
N'agbanyeghị ya na-agbagwoju anya aha, Saxon Switzerland National Park bụ nnọọ ihe na- Germany. Ọ bụ a sara mbara eke region na ókè-ala-ya na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Czech Republic. Ọ bụ mba na nkume National Park, ma ọ na-kpuchie ke pụtara ìhè ọhịa. Ọtụtụ isi n'ógbè ka soro bulie onu, ma e nwekwara a adọrọ mmasị mere na inyocha, gụnyere Konigstein Ebe e wusiri ike.
Ka esi Saxon Switzerland ụgbọ okporo ígwè:
The kacha nso nnukwu obodo ka ogige bụ Dresden, nke dị mfe iru site okporo ígwè si ukwuu nke Germany. site n'ebe, S-Bahn ụgbọ oloko jikọọ Saxon Switzerland ọ bụla 30 nkeji.
Mgbe ị na-na na na Germany, anyị na-atụ aro na ị na-eleta ndị Black Forest. Ikekwe Central Europe kasị ama ọhịa, a abụghị onye na-atụ uche. Nke a pụtara ugwu ugwu n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ-Germany nwere ya niile - oké Evergreen ọhịa, ịrịba ama ugwu, na quaint obodo nta. Ọ bụ n'ụlọ cuckoo clocks-akpa azụ 1700s, na ọtụtụ obodo enwe mmetụta na-aracha ogologo oge dị anya. The akụkọ-akụkọ ikuku lends onwe ya n'ụzọ zuru okè zuru escapism si ata ụwa, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-achọ!
Ka esi The Black Forest ụgbọ okporo ígwè:
Onye nke kasị mma ụzọ ahụmahụ na Black Forest bụ ụgbọ okporo ígwè. The Black Forest akara na-agba n'etiti Offenburg na Konstanz. Ọ na-enye ịrịba echiche nke mpaghara na-akwụsị na ọtụtụ obodo n'ụzọ.
Leipzig na Dresden Ụgbọ oloko
Hallerbos Forest, ma ọ bụ "The Blue Forest", bụ a pụtara oké ọhịa zuru okè n'ihi na ogologo sinik hikes. Ihe ka nnọọ carpets nke bluebells nke gbapụta ke ufọt ufọt April kwa afọ na-enye mara mma ọhịa ya aha. E nwekwara ibu Sequoia osisi na-eme ka a nleta a mara mma gbatia nke ala a rejuvenating ahụmahụ.
Rịba ama na oge kacha mma iji gaa Hallerbos ijide bluebells bụ dị iche iche kwa afọ na-adabere na ihu igwe. The mee elu mee okpomọkụ adahade, na mee elu mee okooko osisi oge ntoju. Ugbu a ga-adị oké oge na-aga, dị ka o yiri ka nwetara ọkụ a bit mgbe e mesịrị ka ufọt ufọt April afọ a. Ma, ọ bụ a-alụso oge dị ka ọkụ weather pụtakwara na osisi ga-esi ha epupụta azụ, anapụ bluebells nke ìhè anyanwụ, nke na-eme ha ka grayish. Ọ dịghị mma ka gị Instagram eserese!
Ebe a bụ a NDỤMỌDỤ:
Mgbe bluebell oge na-eru nso, na website nke Hallerbos posts kwa ụbọchị mmelite (n'izu) banyere ọnọdụ nke bluebells. Nke ahụ ụzọ foto na ihe ndị ọzọ ọbịa mara ma ọ bụ ka kwa n'oge na-aga, ma ọ bụ ma ha kwesịrị ime ngwa ngwa.
Ka esi Hallerbos Forest ụgbọ okporo ígwè:
E nwere mgbe niile ụgbọ oloko si Brussels na Halle na-ewere dị nnọọ 16 nkeji. site n'ebe, enwetaghị TEC ụgbọ ala nọmba 114 na-esi na oké ọhịa n'ọnụ ụzọ.
Njikere na-esi gị agwa on? Mgbe ahụ nye iwu tiketi ahụ maka ndị ukwu n'èzí na-enyemaka nke Save A Train. Ọ dịghị zoro ezo ụgwọ. Dị nnọọ oké njem!
Brussels na Halle Ụgbọ oloko
Antwerp na Halle Ụgbọ oloko
Brugge na Halle Ụgbọ oloko
Ghent na Halle Ụgbọ oloko
The kasị ibu mba park na Norway bụ n'èzí-nwoke paradise. The irutụrụ ala dị larịị, otu n'ime ndị kasị ibu eroded mbara ọzara na Europe na 2,500 square kilomita, kpuchie site scrubby moorlands na ọtụtụ ọdọ mmiri, osimiri, na iyi. Kpamkpam n'elu treeline, ị pụrụ ịhụ maka kilomita ọ bụla direction, eme ka ọ na a oké hotspot maka hiking.
Ọ bụrụ na ị na-na na atụmatụ a ogologo njem, ijide n'aka na-abịa a poolu azu: mmiri ebe a na-jukwara na azụ. Fans of reindeer will find that Hardangervidda is among the best national parks for them, dị ka ya na ìgwè ehi bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu n'ụwa. E nweghị ihe ọ nnọọ ka na-ekiri puku atụ aga kwekọrọ gafee na mbara ọzara; ọ bụ a anya na onye ọ bụla ga-ahụ na ụfọdụ ná ndụ ha.
Ozugbo ị na-na na na Oslo, ị chọrọ na-esi na Hardangervidda ụgbọ okporo ígwè I nwere ike na-ụgbọ oloko si Oslo ka Bo na Telemark. Site n'ebe ahụ i nwere ike enwetaghị “Haukeliekspressen” ka Rauland. I nwekwara ike na-Bergen Railway si Oslo ka a ọnụ ọgụgụ nke ebe ndị na-akwa amalite isi n'ihi na ịgagharị Hardangervidda - https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dig, Finnish, Haugastol, Ustaoset na Geilo.
Site Bergen na Hardangervidda ụgbọ okporo ígwè The Bergen Railway stops at number of places that are great starting points for exploring Hardangervidda – Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset na Geilo. I nwekwara ike ile okporo ígwè na Voss na a ụgbọ ala si Voss ka Eidfjord.
Njikere tinye ụfọdụ ndị kasị mma National Parks na Europe gị ịwụ ndepụta? ka Save A Train enyere gị aka inwe e ngwa ngwa, na-enweghị kwukwara, zoro ezo na-akwụ ụgwọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Europeparks #Nationalparks #nationalparkseurope europetravel longtrainjourneys Train Travel njegharị travelgermany travelnorway traveltips